Wasiirada cusub oo xilka la wareegay. - Caasimada Online
Home Warar Wasiirada cusub oo xilka la wareegay.
Wasiirada cusub oo xilka la wareegay.
Wararka Madaxtooyada villa Somaliya laga helayo ayaa waxa uu soo sheegayaa in xaflad xilalka ay ku kala wareegayaa wasiiradii hore iyo wasiiradii cusub ee xukuumada Somalia ay ka dhacay.
Goordhow waxaa lasoo gaba-gabeeyey xil wareejintii wasaaradii qorsheynta waxaana wasiirkii hore ee wasaarada qorsheynta iyo xiriirka Caalamiga ahaa waxa uu ku wareejiyey wasiirka cusub ee wasaarada Maaliyada iyo Qorsheynta Qaranka Maxamuud Xasan Suleymaan Cawil.
Cabdulaahi goodax bare oo ah Wasiirkii hore ee wasaarada qorshaynta iyo Xirirka Caalamiga ayaa waxaa uu si rasmi u sheegay in xilkii uu ku wareejiyay Wasiirka Cusub ee wasaaradaas.
Waxaa uu sheegay inay waxbadan soo qabteen intii ay xilkaas ay hayeen.
Sidoo kale waxaa Xaflad xil kukala wareegid ay ka dhacday madaxtooyad Vila soomaaliya halkaas oo ay kukala wareegayeen wasiirkii hore ee Maaliya iyo wasiirka Cusub Maxamuud xasan Suleymaan waxaana ku warejiyay xilkaas wasiiru dowladaha wasaarada maaliyada.
Waxaa iyana ka soconeysa Dugsiga tababarka ciidamada Booliska Somaliyeed Janeral Kaahiyey (Iskool boliisiyo) munaasabad xilalka ku kala wareegi doonaan wasiirkii hore ee arimaha gudaha iyo amniga qaranka iyo wasiirka cusub.